Wasaaradda Boostada iyo Isgaadhsiinta Soomaaliya Oo Dib-u-dhisaysa Xaruntii Taleefannada – WARSOOR
Wasaaradda Boostada iyo Isgaadhsiinta Soomaaliya Oo Dib-u-dhisaysa Xaruntii Taleefannada
Muqdisho – (warsoor) – Wasiirka Boosta, isgaarsiinta iyo Teknoolojiyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya (XFS) Eng. Cabdi Canshuur Xasan, ayaa maanta la wareegay xarunta taleefannada dalka oo ku taalla degmada Warta Nabadda ee gobalka Banaadir.
Wasiirka ayaa hadal kooban oo uu ka jeediyay gudaha xarunta ayaa ku sheegay in ugu dambayn June 10, 2019 in dib-u-dhis lagu billaabayo, marka lagu guulaystana dhismahana laga dhigayo xarun tababar oo dhallinyarada Soomaaliyeed ay kusoo bandhigaan hal abuurkooda la xariira Teknoolojiyadda.
Qoysas ku harsan oo qayb ka ahaa dadkii ku noolaa dhismaha intii aan dowladdu dib ula soo wareegin ayaa wasiirku ku war-geliyay in ay ka guuraan inta aan la gaarin waqtiga loo qorsheeyay in uu billaawdi dib-u-dhiska si ay qayb uga qaadato fududaynta adeegyada wasaaraddu bixiso iyo shaqo abuurka dhallinyarada Soomaaliyeed.
Wasaaradda Boosta oo dib u soo celiyay adeegyo badan oo lagu waayay burburkii dalka ayaa maalma ka hor waxa ay shaacisay in dib-u-dhis lagu billaabayo xarunta machadka tababarka isgaarsiinta qaranka, arrintaas oo qayb ka ah daadejinta adeegyada wasaaradda iyo hir-gelinta halbeegyada ay ku leedahay tubaha qaranka.
Wasiir Bayle”IMF way ku qanacday dhamaan sidii aan uga soo baxnay shuruudihii SMP3″
Maxkamada Ciidamada Militariga Soomaaliya oo soo gabagabeysay dhageysiga dacwad ka dhan Nin Argagixiso Lagu Eedeeyey